Ilay Vehivavy Miantafika Irery Miady Amin’ny Aretina Thalassemia Ao Pakistàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 16:58 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Español, English
Ayesha Mehmood miteny mandritry ny Andro Erantany Ho An'ny Thalassemia. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'i Ayesha Mehmood.
Ayesha Mehmood no mpitondra teny ofisialin'ny Thalassemia Pakistan – fikambanana iray izay manentana mampahafantatra momba ny aretina manaranaka vokatry ny fikorontanan'ny asan'ny rà.
Mehmood, izay tratry ny thalassemia henjana rahateo ary namoy roa tamin'ireo mpiray tampo aminy noho io aretina io, dia nandray azy io ho iraka tontosainy amin'ny fiainany mba hanentanana ety anaty media sosialy momba ny loza mananontanona entin'ilay fikorontanana ho an'ny fiainana, sy mba hampihenàna ny fanilikilihana ara-piarahamonina mifandray amin'io aretina io ary hanosehana ny hanaovana lalàna hanampy amin'ny fanakànana azy io tsy hihitatra.
Miampitapita amin'ny fianakaviana ny Thalassemia. Mamokatra liomena manana endrika tsy lavorary ny vatan'ny olona tratry ny thalassemia, ilay molekiolan'ny proteina tomponandraikitra amin'ny fitondràna oksizena ao anatin'ny selamenan'ny rà. Miafara amin'ny fahapotehana tafahoatra manjo ny liomena ny fikorontanana izay mitondra mankany amin'ny tsy fahampian-drà. Raha samy manana fototarazo niova endrika ny ray sy ny reniny – endriky tsy ahitàna soritr'aretin'ny thalassemia malefaka – ny zanak'izy ireo kosa dia mety ho tena tandindonin-doza be amin'ny tsy fahampian-drà ny fiainany.
Tamin'ny herinandro farany tamin'ny volana May, nisy andianà parlemantera avy ao Pakistàna nandàny tsy nisy nitsipaka ny tolodalàna iray hanaovana ny fitiliana rà ho zavatra tsy maintsy atao alohan'ny fanorenana tokantrano ho an'ireo fianakaviana misy thalassemia, miaraka amin'ny tolokevitra tsy maintsy anaovana izany alohan'ny mariazy mba hisorohana ny fihanaky ny aretina. Raha ny sasany mahita ilay tolodalàna ho tafahoatra, Mehmood kosa, izay mandeha amin'ny “Blessed Ayesha” eny anaty sehatry ny media sosialy, dia nizara ny fahatsapàny tao amin'ny Facebook tamin'ny filazàna fa tena ilaina ny fepetra henjana hanakanana ny fiparitahan'ny thalassemia:
Raha toa ireo olompirenantsika efa matotra ara-tsaina ka mandeha manira-tena hanao fitiliana, dia tsy hila akory ny governemanta hanery azy ireo hanao azy io. Raha mba tsapan'izy ireo fotsiny. Manohina mafy ny mahita zaza vao teraka tsindronina in-droa na in-telo mba hitadiavana ny làlan-dràny hanaovana famindràna rà. Mampalahelo isika fa mbola miaina anatin'ny dour-e-jahalat (vaninm-potoanan'ny tsy fahalalàna.)
Araka ireo tatitra, ankizy 5.000 isantaona no voatily tratry ny endrika thalassemia henjana ao Pakistàna. Tsy maintsy miatrika famindràna rà tsy tapaka ireo marary tratry ny Thalassemia, izay mahatonga azy ireo harefo mora voan'ny VIH sy ny hepatita. Ary mety ho tena faran'izay manaintaina mafy tokoa ireny fotoana ireny. Tantarain'i Mehmood miaraka aminà ampahanà torohay madinidinika ireo zavatra niainany mety ho afaka hanampy marary hafa :
Nijaly ireo andian-taranaka tamin'ny taona 80s satria tsy mbola nisy fahatongavan-tsaina tamin'izany fotoana izany. Saingy nahoana no misy tranga vaovao isantaona izao na efa nisy aza ny fanairana nataon'ny media, ireo ivontoerana momba ny thalassemia , sns. Minoa ahy fa tena manohina mafy mihitsy ny mahita zaza vao teraka tsindronina in-droa na in-telo mba hitadiavana ny làlan-dràny hanaovana famindràna rà, tsy tokony handalo amin'izany izy raha toa ny ray sy reniny mba afaka nandeha nitevika kely indray mandeha monja nanao fitiliana liomena “hemoglobin electrophoresis”. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Amin'ity andro ity dia te-hangataka ny hamoram-ponareo rehetra aho mba hanolo-tena hanao fitiliana thalassemia ary raha afaka manome rà ianareo dia miangavy aho mba tsidiho ireo ivontoerana momba ny thalassemia ao amin'ny tanànanao ka manao fanomezana iray ho an'ny aina mba ho an'ireo namanao tratry ny thalassemia! Ary ho anareo namako tratry ny thalassemia, karakarao tsara ny tenanareo, tsy latsa-danja noho ny hafa ianareo, mba hiaina fiainana iray lavabe anaty fahasalamàna sy hafaliana isika, amen 🙂
Zara raha misy na tsy misy mihitsy aza fanairana fanentanana momba ny hirifiry iaretan'ireo marary mandritra, eo anelanelany ary aorian'ireny famindràna rà ireny. Efa fahazarana ho an'i Mehmood ny fiainany ny famindràna rà atao aminy :
Tsy mahita toerana tsara (mba hametahana ny fanjaitrany) ny mpanampy ny mpitsabo
Ny sasany amin'ireo soritr'aretna mahazatra amin'ny thalassemia no ahitàna fanimpanina, marary an-doha na tongotra volivoly, ankoatry ny maro hafa
Nifoha niaraka tamin'ny aretin'andoha sy fanaintainana tamin'ny tongotra #Tsy AndrokoAndroany
Saingy tsy nanakana an'i Mehmood tsy hanolo-tànana ny hafa ao anaty fanaintainana izany:
@shadesofsunrise Antenaiko fa salama tsara ianao. Ampahafantaro ahy raha mila fanampiana azafady
Tsy izany ihany, mba hiantohana fa afaka mahazo famindràna rà tsy tapaka ireo marary tratry ny thalassemia, tsy tapaka manao fanangonam-bola sy fanohanana i Mehmood .
Miangavy, tongava mamangy sy manome rà!
Fangatahana am-panetren-tena avy aminay izany
Tolona efa ela ny an'i Mehmood sy ireo hafa miady mba hanakanana ny fiparitahan'ny thalassemia saingy tsy mbola niala an-daharana ry zareo.
Miaraka amin'ny volan'ny Ramadàny efa managasanga, sy ny ho fisondrotan'ny fanarahana fandaharana ao amin'ny TV ho amin'ny haavony ambony indrindra, ataony azo antoka ny handrakofan'ireo media mahazatra ity olan'ny fikorontanan'ny rà ity. Faramparany teo, seriny izy tao amin'ny Twitter tamin'ny fandònana ireo mpanolotra media malaza, nandrisika azy ireo mba hiresaka ny thalessemia amin'ny fandaharan'izy ireo :
Amin'ity Ramadàny ity, miangavy aho mba hanaovana fandaharana iray fanentanana momba ny thalassemia. Mba mitsidika toby iray na miantso ankizy vitsivitsy ho ao amin'ny fandaharanareo ?